UKUQHUBEKA KWISIGQIBO: INDLELA YOKUFUMANA UKUGUQUKA?
Kwimisebenzi yemathematics ukuguqulwa kwe iqhezu ukuya kwishumi Ngomnye wemisebenzi enzima kakhulu xa uqala ukuphanda kwiinkqubo ezibanzi, namhlanje sikulethela iindlela anokuguqulwa ngazo omabini la manani.
1 Iqhekeza ukuya kwishumi
1.1 Inombolo yamaqhekeza
1.2 Inani ledesimali
3 Eminye imisebenzi
3.1 Sombulula ukusuka kwiqhezu ukuya kwishumi
3.2 Guqula idesimali ibe liqhezu
3.3 Amanani wokugqibela angachanekanga
Iqhekeza ukuya kwishumi
Ngaphambi kokuqala ukuchaza inkqubo ye Ungaliguqula njani iqhezu libe sedesimaliKubalulekile ukuba abafundi bayazi intsingiselo kunye nenkcazo yamanani ahambelana neqhezu kunye nedesimali; Nangona zifana kwiziphumo zazo, ulwakhiwo kunye nokuhambelana kwazo kwahlukile.
I-S3 iqwalasela isiphumo senani eline-quotient yamabinzana amabini e-algebra ebhalwe ngale ndlela ilandelayo u-a / b, apho b ≠ 0. Kuwo unobumba "a" ubizwa ngokuba yinani elingezantsi kunye nonobumba "b" idinomineyitha; Ukuguqulwa kweqhekeza kuba sisishumi kwaye ukusombulula kufuneka uhlule ngo-b ukwahlula-hlula ngenani elingezantsi.
Igama lamaqhezu livela kwisiqendu sesiLatini, amaqhezu, aphuke, okanye aphuke, kwimisebenzi ethile yemathematika ibizwa ngokuba liqhekeza eliqhelekileyo, iqhezu elixutyiweyo okanye iqhezu ledesimali. Ngenxa yoko, unokwenza iqela ukusuka kumanani endalo ukuya kuthiwa ngamanani anengqiqo; zikwamelwe luphawu (a / b) nakweyiphi na imisebenzi yemathematika.
Sisiphumo sokusebenza kwamaqhezu, nangona kunjalo asixhomekekanga kule nkqubo: Ke ngoko, inani lokugqibela lelo xabiso linexabiso lokugqibela elinokumelwa kwinkqubo yedesimali yokubala; Oko kukuthi, licandelo lokwahlulahlula inani, elingenaso isiphumo esichanekileyo kwaye kufuneka lahlulwe ngamaxabiso amanani ngokusebenzisa ikoma.
Bayabizwa iidesimali, kuba bavelisa ixabiso elongeziweyo kwinqununu, ukumisela amanani ongezelelweyo emva kokwenza ukwahlula kwalo naliphi na inani. Zahlukile kumanani apheleleyo, ahlelwe ngokwezibalo kwaye enziwe ngamanani ngqo, awachongi naliphi na ixabiso elongezelelweyo.
Ukuguqula i iqhezu ukuya kwishumi, yahlulahlula ngokulula inani elingezantsi. Umzekelo, ukuba kufuneka sitshintshe inani u-5/8 ukuya kwidesimali, kufuneka senze ukwahlula phakathi ko-5 no-8, sifumane isiphumo sokugqibela esingu-0,625; elingana neqhezu 5/8. Unokwenza iinkqubo esiza kubona kamva.
Njengoko sibona ukuba isiphumo sokugqibela simisela amanani amaqhezu amathathu. Nangona kunjalo, kukho amaqhezu athi emva kokwenza lo msebenzi, akhokelele kumanani edesimali amaxesha ngamaxesha; Oko kukuthi, inani okanye ulandelelwano lwamanani oluphindaphindwa amatyeli amaninzi kunye nexabiso elithile ledada; Injalo imeko yokwahlula iqhezu phakathi kwe-4 kunye ne-3, kukhokelela kwinani eli-1,333333, apho uphinda-phindo lwesi-3 lubizwa ngokuba lixesha.
Ukunciphisa indawo kwaye ungabeki lonke ixesha, ukwehla kwexesha elichaziweyo kubuncinci kusetyenziswa, Oko kukuthi, endaweni yokubeka i-1,333333, i-1,3 kufuneka ibekwe. Nangona kunjalo, iqhezu elixubekileyo lenziwe ngenani elipheleleyo kunye neqhezu. Kodwa makhe sijonge eminye imizekelo apho imisebenzi yamaqhezu idityanisiwe apho inani elingezantsi okanye inani elingaphezulu lifanekiswa linani lokugqibela.
Siza kubona ngezantsi kweminye imisebenzi apho kufunyanwa khona amanani edesimali ekufuneka ongezwe ngamaqhezu. Umzekelo wokuqala ngulo ulandelayo: sinexabiso 5/4 + 0,25; Kule meko sijonga ukuba sisuntswana elinzima, sinokhetho lokuguqula inani eliqhekeziweyo libe lidesimali kwaye senze umsebenzi, okanye sidlulise inani lokugqibela kwiqhezu (elintsokothileyo)
Sombulula ukusuka kwiqhezu ukuya kwishumi
Ukuba asifuni ukwenza umsebenzi wokwahlula ngokuthe ngqo, okanye ukusebenzisa ikhalityhuleyitha, kufuneka sifunde Uguqula njani iqhekeza kwiidesimali, Ngesi sizathu sicebisa ukwenza le nkqubo ilandelayo; Okokuqala, sifumana inani elinokuvelisa iqhezu le-10, 100 okanye i-1000 kwisiphumo sedinomine, oko kukuthi, ukuba sino-5 njengedinomineyitha kunye no-4 (4/5) njengenani, isihlanu siphindaphindwe ngo 200 ukufumana isiphumo se-1000, kwinani-manani 4 liphindaphindwe ukufumana ixabiso lama-800.
Iziphumo zilandelayo: 800/1000, neziphumo zezibalo kwinani lokugqibela elingu-0,8. Njengoko sibona, yinto nje yokuhlalutya nokucinga kancinci malunga namanani ukuze sikwazi ukusombulula; Le nkqubo inokwenziwa ngalo naliphi na inani, uhlala ekhangela kwinani elihlala libuyisa ixabiso elili-10, 100 okanye elili-1000; Ezi xabiso zinokwahluka ngokobudlelwane obukhoyo phakathi kwamanani.
Guqula idesimali ibe liqhezu
Le Turk inde kancinci kodwa iyasebenza; Siza kuguqula amanani edesimali sibe liqhekeza, sisebenzisa iinkqubo ezaziwa ngabo bonke, siqala: Sithatha umzekelo weli nani elilandelayo u-0,25; Ke kufuneka sazi ukuba yintoni eyona nto idinomineyitha yayo, kumaxesha amaninzi ekuphela kwento ekhoyo ekhoyo ngu-1; emva koko senza oku kulandelayo 0,25 / 1.
Emva koko sisebenzisa elinye inani 1 lilandelwa ngooziro abaliqela; Sizama ngo-10 okanye ngenani eli-100, kule meko sibeka u-10 kwaye sino-0,25 / 1 alandelayo =? / 100; emva koko sinokulingana. Ngale ndlela siphinda-phinda amanani amabini ngo-10, size ke sibe no-0 x 25 = 10 inani elingezantsi kunye negama elingezantsi ngu-2,5 x 10 = 10, inani ke lize libe ngu-100/25, ngokwenza lula sifumane i-100/1.
Amanani wokugqibela angachanekanga
Sinenombolo engu-2,14141414… .esona sizathu simiselweyo sokuba u-x = 2,14, siqhubeke nokuphinda-phinda ngo-10, 100 okanye 1000, njengokuba ixesha liphindaphindwa; Kule meko iphindaphindwe nge 100 ukusukela ukuba ixesha liphindaphindwa qho emva kwamanani amabini, oko kukuthi, oothi ​​ababini, ukuba aliphindaphindwa liphindaphindwe ngo 10. Sine 100 x = 214,1414141414. Elo nani longezwa ku-x elingana nenani le-2,14141414, emva koko sinokuthi sithathe phakathi kwamaxabiso omabini:
Isiphumo ngu-99 x = 212, apho ngokucoca x sifumana inani elingu-212/99, kwaye lelona nani besilifuna, kubalulekile ukuqaphela amaxesha aphindaphindwa inani kwinani lokugqibela, kuba oku kuyakumisela inani leziro eliza kongezwa kwinombolo 1.
Okokugqibela, kukho amanani edesimali namaqhezu ekunzima ukuwaguqula apho kufuneka kwenziwe khona iinkcukacha ngakumbi kunye neenkqubo ezithile; Izisombululo zinokuthatha ixesha kwaye zifuna ulwazi oluthile lweminye imisebenzi yemathematika, efundwa kumanqanaba emfundo ahlukeneyo, ngakumbi ohlobo lwaseyunivesithi.
Ukuba ufuna ukwazi izihloko ezinxulumene noko, ukumema ukuba ufunde inqaku elilandelayo Yenza lula amaqhezu: Funda ngamanyathelo ambalwa